Umnqamlezo - wokuluka ilaphu elingalukwanga lolona hlobo luthandwayo lokutya okuziinkozo ukongeza kumachokoza amachaphaza. Olu hlobo lweenkozo luhle kwaye lusefashonini kunokhozo lwamachaphaza. Kufanelekile ngakumbi njengelaphu ukubonisa ngaphandle kwemveliso. Ezifana nelaphu elisetyenziselwa ukusonga iintyatyambo, ezinjengebhokisi yethishu engalukanga, exhaphake kakhulu e-China.
Xa kuthelekiswa namalaphu alukiweyo, amalaphu angalukwanga ngokubanzi anokufumana kwakhona ukufuma okuphantsi kwaye athambekele kumbane ongagungqiyo ngexesha lokuvelisa kunye nokusetyenziswa. Iimpawu zentlantsi ezenziwe ngumbane ongashukumiyo zinokubangela ukuqhuma kwezinto ezithile ezinokutsha. Iintlantsi kunye nombane ongashukumiyo ziya kwenzeka xa unxibe inayiloni okanye iimpahla zoboya kwimozulu eyomileyo. Oku akunabungozi emzimbeni womntu. Nangona kunjalo, kwitafile yokusebenza, iintlantsi zombane zinokubangela ukuqhuma kwe-anesthetic kwaye kwenzakalise oogqirha kunye nezigulana.
I-100% ye-PP engenamalaphu ephothiweyo yamkela i-anti-UV PP entsha, ine-UV ephezulu kunye nepropathi yokulwa ukwaluphala. Emva kokufaka ngokuthe ngqo izinto ezingavuthiweyo, inokuthintela ngokufanelekileyo umphezulu welaphu le-polypropylene engalukanga ekubeni mnyama ngenxa yokuguga kwezinto. Kk Ilaphu nonwoven uluhlu anti-UV kunokuba 1% -5%, ixesha anti-ukwaluphala kunokuba phantsi bume kwelanga. iminyaka eyi-1-2.
Ukugqitywa kwelangatye okubizwa ngokuba kukugqitywa komlilo. Ilaphu eligqityiweyo akukho lula ukulitshisa kwaye ucime umlilo. Kufezekiswa ngokudibanisa amadangatye amadangatye.
Ukusetyenziswa kwamadangatye ekusebenziseni amalaphu angalukwanga, kufuneka ahlangabezane nezi meko zilandelayo:
Ityhefu ephantsi, ukusebenza okuphezulu kunye nokuhlala ixesha elide, ezinokwenza iimveliso zihlangabezane neemfuno zemigangatho emiselweyo yedangatye;
Uzinzo olushushu lwe-malGood, ukuvelisa umsi ophantsi, kwaye unokuhlangabezana neemfuno zamalaphu angalukanga;
NotUnganciphisi ngokubonakalayo ukusebenza kwendalo yengubo engalukwanga;
Ixabiso liphantsi, elilungele ukunciphisa iindleko.
Ilaphu elingenamthungo elingenamikhono liselaphu elingalukwanga ukongeza incasa, ukuze eli laphu livelise ivumba lelaphu elingalukwanga!
Ukuthetha ngokubanzi, ukuqhumisa ilaphu elingalukanga linazo zonke iimpawu zelaphu eliqhelekileyo elingalukwanga, kwaye luhlobo olutsha lwelaphu elingalukwanga uluhlu olubanzi lwezicelo.
Uqine Strong non-ephothiweyo ilaphu yenziwa ngokusebenzisa inkqubo yethu, ingakumbi eqine esomeleleyo non-ephothiweyo ilaphu.Ukuze kuphunyezwe uxinzelelo olomeleleyo, akukho lula ukukrazula, ukuba kwizinto ezingafunekiyo, inkqubo yemveliso amakhonkco amabini kufuneka agqibelele.
Ilaphu elomeleleyo lokuqina elingalukwanga lihlala lisetyenziswa kwiingxowa ezingalukwanga ezibanjwe ngesandla, ezifanelekileyo ukuthwala izinto ezinzima ngaphandle komonakalo.
Zingasetyenziselwa ukwenza iingxowa zerayisi, iingxowa zomgubo.
Ilaphu likwayimeko yokusingqongileyo kwaye lihla ngokukhawuleza emva kokuba lilahliwe.
Indwangu yePolypropylene engeyiyo ephothiweyo, Polypropylene Spunbond Non womluki Ilaphu, Ixabiso loLuhlu lweLaphu, Kk Non womluki Ilaphu, Izinto ezingalukanga, Non womluki Ilaphu,